TRUTH AND PEACE: 2007
ရာဇာဝင်ထဲက မင်းဒသဟာ၊ စိတ်ကြမ်း လူကြမ်း
ရာဇ၀င်ထဲကမင်းရာမဟာ ၊ မြသားအဆင်း
ရွှေ ခြေနှင်းနဲ့ ၊ မျှားခင်းလေးတင် ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့သူ။
ရာဇာဝင်ထဲကယမင်းလှဒေ၀ီ ၊ မယ်သီတာကား
အလှဆွတ်ချူ ၊ နိုင်သူယူတမ်း
သည်ဇတ်လမ်းဝယ် ၊ သွေးနှယ်ရေစီး
မြေတုန်းဟီးအောင် ၊ ကြံဆောင်စီမံ
မောဟသခင် ဇတ်ညွန်း တည်း ၊ ဒေါသဘုရင် ဖြစ်ထွန်းတည်း
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 29.12.073ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 27.12.072ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
တစ်နေ့တုံးက စကားလေးတစ်ခွန်းကို ကြားပြီး၊ ဒီစာကိုရေးဖြစ်တာပါ။ စာရေးသူကတွေးပြီး ဖတ်ရတာကိုကြိုက်တယ် ၊ စာဖတ်ပြီးတိုင်းလည်း တွေးတတ်ပါတယ်။ အကြောင်းအကျိုးကိုစဉ်းစားပြီး ၊ ငါဆိုရင်ကောဒီလိုလုပ်မှာလား။တွေးတာလေးတွေကိုပြောတာပါ။
အကြောင်းမဲ့တဲ့အကျိုးတရားဆိုတာ ဒီလောကမှာမရှိသလို အကျိုးမဲ့တဲ့ အကြောင်းတရားဆိုတာလဲ မရှိပါဘူး။ဇြစ်မှု ၊ ပျက်မှု တိုင်းရဲ့နောက်မှာ အကြောင်းတရား အကျိုးတရားဆိုတာရှိမှာပဲ။ ဆိုးတာကောင်းတာနဲ့မှားတာ မှန်တာပဲကွာသွားတယ်။
ဥပမာ ဆိုပါစို့ ငါမှန်တာကိုလုပ်တယ် ဟုတ်ပါတယ် လူတိုင်းဟာမှန်တယ်ထင်လို့ လုပ်ကြတာချည်းပဲ။ မှားတယ် လို့သိနေရင်ဘယ်သူမှမလုပ်ကြဘူး၊ ဘယ်သူမှအမှား ကိုလုပ်ချင်သူမရှိဘူး။သူလုပ်တာသူအမှန် ၊ ငါလုပ်တာငါအမှန် ။ ဟုတ်ပါပြီ ။ထားလိုက်ပါတော့ မှန်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့၊ ဒီမှန်တယ် ၊ မှားတယ် ဆိုတဲ့ဟာကို ဘယ်ပေတံနဲတိုင်းမလဲ?ဘယ်ရှုထောင့်ကသုံးသပ်မလဲ?
စာရေးသူကဘုရားစကားကိုအမှန်တရားပေတံအဖြစ်ထားတယ်။တကယ်လည်းမြတ်စွာဘုရားဟာသုံး လောကရဲ့ဘက်လိုက်မှု အကင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ် ၊
အဂတိ အကင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်တိုင်း ဟာ သစ္စာထိုက်တယ်။သစ္စာတရားကိုစော်ကားသူ ၊ အမှန်တရားကိုစော်ကားသူ၊အမှန်ကိုမသိအောင်တားဆီးပိတ်ပင်သူမှန်သမျှဟာ ၊ မြတ်စွာဘုရားကိုစော်ကားသူပဲ။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရန်သူပဲလေ။
အမှန်တရားကိုမသိအောင် တားဆီးပိတ်ပင်ထဲကာထက်ကြီးတဲ့အကုသိုလ်မျိုးစာရေးသူမဖတ်သေးဘူး။ မတွေးမိဖူးဘူး။
မြတ်စွာဘုရားဟာဒီအမှန်တရားကိုသိဖို့ဘ၀ပေါင်းအသင်္ချေပေါင်းများစွာပါရမီဖြည့်၊အနှစ်နာခံပြီး ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေခဲ့တာပါ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီသတ္တ၀ါတွေကိုပြောခဲ့တာအမှန်တရားအတွက်မနားမနေအလုပ်ခဲ့တာ၊ တွေးရင်းကြည်ညိုတယ် ။
ဒါတောင် မှ ဟေ့ ကာလမ တို ငါပြောတာမယုံနဲ့ ။ ကိုယ်တိုင် လုပ်ကြည့်ပြီးမှ ၊ ကိုယ်တိုင်သိမှယုံ။
ဘယ်လောက်ကောင်းလည်း ၊ တဖက်သားရဲ့ လွပ်လပ်မှု ကို မြတ်စွာဘုရားလေးစားတယ်။ အသိမှတ်ပြုတယ် ။ ငါကိုကိုးကွယ်ပါ လို့ ဘယ် တော့မှ မပြောဘူး ။ အဲဒီ လောက်ထိလွပ်လပ်တယ် ။
သီဟစစ်သူကြီးအယူမှားတွေစွန့်ပြီးတိတ္ထိတွေကိုမလှုလို့ ။ လှူပါကွာလိုတိုက်တွန်းတာလည်းမြတ်စွာဘုရားပါပဲ။
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 26.12.070ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
လမင်းက ငါ့ နံဘေးကိုခုန်ဆင်းပြီး
လကြယ်မြူနှင်း ၊ အားချင်း ပြိုင် အနိုင်လု
လ က လည်း လ
နှင်း က လည်း နှင်း
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 24.12.072ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
ဒီတစ်ခါ တော့ ၊ ကျွန်တော်သိပ်ပြောချင်တဲ့ အကြောင်း က မေတ္တာ အကြောင်း ပါ ။ သိလွန်းလို့ ရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး ။ သိသလောက် လေးပြန်ပြီး ဝေဌ တာပါ ၊တစ်ခါ တစ်ခါ စာရေး သူပြန်စဉ်းစား ကြည့်မိတယ် ။ ငါတကယ် သိတာဘာရှိလဲ လို့ ရောင်ဝါးဝါး ပဲသိတာ ။တကယ်ပိုင်ပိုင် နိုင်နိုင် သိတာ ဘာမှမရှိသေးပါဘူး ။ အခုလည်းမေတ္တာအကြောင်း ကိုပြောမယ်ဆုံ ပြီးတော့ ၊ စဉ်းစား တယ် ။ စာအုပ်တွေလျှောက် ဖတ်ရင်းနဲ့ တွေးတယ် ။ ပြီးတော့ ပြန်စဉ်းစား တယ် ၊ စာထဲ က အတိုင်း ပြောမှာလား ၊ ကိုယ်နားလည် သလောက် လေးပဲ ဖေါက်သည်ချမှာလားပေါ့ ၊ နောက်ဆုံး တော့ ကိုယ်နားလည် သလောက် လေးပဲပြော မှာပါ လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ၊ ဒီ စာလေး ကိုရေးဖြစ်တယ် ။ အတူတူ စဉ်းစား ပြီးဖတ်ကြရအောင်ပေါ့ ။နဂိုရ် စာကအရမ်းရှည်တယ်။ ဗဟုသတ လည်းပါချင် သေးတယ်လေ ။ ဒါပေမဲ့ စာရေးသူ ရဲ့ နည်းပညာမကျွမ်းကျင် မှု စာအရေးသားမကျွမ်းကျင်မှု ၊ စတဲ့ အထွေထွေ ခက်ခဲ ပေါင်း များစွာ ကြောင့် ဒီစာတိုလေးပဲ ရေးဖြစ်သွားတာပါ ။
ငယ်ငယ်လေးထဲ ကဗီဇ လို့ပြောရမှာလား ။ မသိဘူး ။ မေတ္တာပို့ရတဲ့အလုပ်ကိုပျော်ပျော်ကြီးလုပ်တတ် တယ် ၊ မေတ္တာဘာဝနာ ကိုစိတ်ဝင်စားတယ် ။ တတ်နိုင်သလောက် လဲကြိုးစားလေ့ကျင့်တတ်ကြာလာတော့ပျော်လာတယ်။ ဒီလိုနဲ့နှစ်တွေကြာလာတော့ မေတ္တာ ပို့ရာ မှာ သတိ သတိပိုမြဲ လာသလိုခံစားရပါတယ်။်
မေတ္တာနဲ့ တသားတည်းတော့ လုံးဝ မကျသေးပါဘူး ၊ လေ့ကျင့် တုံးပါ ။ ဒီလိုနဲ့ မေတ္တာအကြောင်း ရေးထားသမျှအကုန်ဖတ်၊ လက်လှမ်း တမှီ ပေါ့နော် ။ ဆရာတော် သံဃာတော်တွေမေးလျှောက် ၊ ဘယ်လိုပို့လဲ ၊ ဒီလိုလုပ်လို့ရလား ။ စသဖြင့်ပေါ့လေ ။ရသမျှ စုဆောင်း ၊ ကိုယ်နဲ့သင့်တော် တယ်လိုထင်တာကိုလေ့ကျင့်နဲ့ပေါ့လေ ။ ဒီနေရာ မှာ သင့်တော်တယ် ဆိုတာက ၊ ကိုယ်ဒီ အလုပ်ကို လုပ်ရတာ ပျော်နေတဲ့ အချိန်ကို ပြောတာပါ ။
တစ်ခါ တစ်လေ လုံးဝ တရားအားလုံး ထုတ်လို့ မကောင်း တဲ့ ရက်တွေရှိတတ်ပါတယ်။ ။အဲဒီလိုအခါမျိုးမှာမေတ္တာပို့ကိုအားစိုက်လုပ်လိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာငြိမ်သက်အေးချမ်းသွားသလို မျိုးခံစားရတယ် လေ ။ ပြီးတော့မှကိုယ်ပေါ်မှာညဏ်ပြန်စိုက်ပြီးကိုယ့်စိတ်ကိုယ်စစ်တာပေါ့ ။
အခုပြန်ပြောပြချင်တာက စာရေးသူရဲ့ အလုပ်လေးကိုပြောချင်တာပါ ။ မေတ္တာပို့တဲ့ အလုပ်ကိုမလုပ်ခင်သီလ ယူပြီး မေတ္တာ ခံ ယူတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ် ။ ကိုယ့်မှာမရှိပဲနဲ့ သူများကိုပေးလို့မှမရတာ ။ ဒီတော့ ရှိအောင်အရင်လုပ်တယ်ပေါ့။ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင် ၊ ထိုင်တတ်သလိုပေါ့ နော် ။ နို့မဟုတ်ရင်လဲရပ်၊ မဟုတ်ရင် လဲလျောင်းပြီးတော့ ပေါ့။
ပြီးတော့ စကြာင်္ဝဠာမှာရှိကြကုန်သော မြတ်စွာဘုရားရှင် အပေါင်းတို့၏မေတ္တာဓာတ် ၊ပညာ ကိုတပည့်တော်/ မ တို့ ခံယူပါ၏ လို့ ဆိုပါတယ်။ ။နောက်ပြီးစကြ၀ဠာအနန္တမှာရှိနေတဲ့ဓမ္မဓာတ်ဓမ္မ်ာကိုခံယူပါ၏။ ၊ ပြီးတော့သံဃာတော်အရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ နောက်ဆုံး ကဒီစကြာဝဠာအနန္တ မှာရှိတဲ့သူတော်စင်အပေါင်းတို့၏ မေတ္တာ ဓာတ်၊ ပညာ တတ်ကိုတပည့်တော်/မ တို့ရှုိသေစွာခံယူပါ၏လို့ စိတ်ထဲ က အဓိဋ္ဌာန်ပြီး ၊ ကိုယ့် ငယ်ထိပ်တည့်တည့် ပေါ်ကမေတ္တာအလင်းရောင်ကြီး စီးဝင်နေတယ်လို့ အာရုံ ပြုလေးနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ် ။(ဆလိုက်မီးကြီးကိုယ့်အပေါ်ထိုးကျနေသလိုမျိုးပေါ့)
လုပ်ကြည့်ပါ ။ အရမ်းကြီး အခက်ခဲတွေ ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေ ၊ မကျန်းမာ သူတွေ ၊ ဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်ပါ လို့ တိုက်တွန်း လိုက် ပါတယ် ။ ကိုယ် တွေ့လေး တွေကို အကြောင်း ဆုံရင် ပြန်ဝေဌပါ့မယ် ။ ဒါဟာ မေတ္တာ မပို့ခင် မေတ္တာ ကိုခံယူတာလေးပါ ။ မေတ္တာ ပို့တာကိုတော့ အခွင့်သင့်ရင် အတူဆွေးနွေး ကြရအောင်နော် ။ပြီးတော့ ဒါဟာ စာရေးသူ ရဲ့အားလုံးအတွက် နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင်ပါလို့…….
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 23.12.072ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
ကျွန်တော် ကဗျာ ကိုချစ်ပါသည် ။ ကဗျာ ဆရာ ကိုလေးစား အားကျကြည်ညိုပါသည် ။ ကဗျာ ဆရာသည် သဘာဝ ကိုချစ်၏ ။ အမှန်တရားကိုချစ်၏ ။ အ၀အမြင်လေးနက်လွန်းသည် ၊ စကားလုံးအသုံးအနှုန်း ကျစ်လစ်သည် ။ ကျွန်တော် ကျေးဇူးရှင် ဆရာက ကဗျာဆရာများကို လူမြတ်ပညာရှိ ဟု သတ်မှတ်သည် ။
ကျွန်တော်ကဗျာ ရေးရန် ကြိုးစား ဖူးပါသည် ။ ကြိုးစား နေဆဲ လည်းဖြစ်၏ ။ စာရွက် ကုန်ပြီး ၊ ရင်ဖတ်နှာသော ကဗျာ များသာဖြစ်လာသည် ။ တစ်ပုဒ် မှ မဟန် ၊နေရာ မကျ ၊ သို့တိုင် လျှက် တစ်ပုဒ်လောက် တော့ရေးကြည့်ဦးမည်ဟုကြံစည်မိသည် ။
ငယ်တုံးက ၊ ဆရာကြီး ဇော်ဂျီ ၏ ကဗျာများ ဖတ်သည် ။ ဆရာကြီး ဦး ၀ဏ် ၏ ကဗျာ များ ဆရာ ကြီး တင်မိုး ၏ ဖန်မီးအိမ်ကဗျာ ၊ဆရာ မင်းမွန၏်ူကဗျာ များးကို စိုက်လိုက်မှတ်တတ်ဖတ်ပြီး သိမ်းထားဖြစ်သည် ။
စာနဲနဲ ဖတ်တတ် လာတော့ ၊ ကဗျာ များ ၏ သိမ်မွေ့မူကို ပိုသိလာသလိုခံစားရသည် ( တစ်ကယ်သိသည်မဟုတ်ပါ )
အခုလည်း ကဗျာ စာအုပ်တွေ ၀ယ်ဆဲဖြစ်သည် ။ ဆရာ မိုးဟိန်း ၏ကဗျာ များကိုမနိုင်ရင်ကန်ဖတ်ရ သည် ကြိုက်သည် ။
သည်နေရာ မှာကြားညှပ်ပြီး ရယ်စရာ တစ်ခုပြောပြရမည်ဆိုလျှင်
ကျွန်တော် ကဗျာ ရေးချင် သည်ဟု ဆရာ့ ကိုပြောသောအခါ ၊ ဆရာ ကသူ့စာအုပ် ဗီရို ထဲ မှ ၊ မာန် လည်ဆရာတော် ဘုရားကြီိး၏မာဃဒေ၀ ကိုချပြီး ဒါကိုအာဂုံရရင် ကဗျာ ရေးတတ်ပြီ ဟုဆိုကတည်းက ကျွန်တော်နဲ့ ကဗျာမတတ်သာခပ်ခွါခွါနေခဲ့ရကြောင်းပါဗျာ။
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 20.12.07 1 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
ဒီလောက မှာသတ္တ၀ါ အားလုံးဟာ ဒုက္ခ ကိုကြောက်ကြတယ် ။ ကျွန်တော် လည်းကြောက်တယ် ။ လူရယ် လို့ ဖြစ် လာရင် အေးအေးချမ်းချမ်း မနေချင်တဲ့ လူရယ် လို့ မရှိပါဘူး ၊ ဘယ်သူ ကမှ နေပူထဲ မှထွက်ပြီး ၊ အလုပ်မလုပ်ချင်ဘူး ။ လမ်းမလျှောက်ချင်ဘူး ။ အေးချမ်းတဲ့အရိပ်ကလေးမှာနေချင်တယ် ။ လုပ်ချင်တယ် ။သက်သက်သာသာအေးအေးချမ်းချန်း နေချင်ကြတာ သဘာဝ ပါ ။
အခုခတ် က ပိုပြီး ၊ အပြောင်းအလဲမြန်လာတယ် ။ နေစဉ် ရုန်းကန်ရမှုတွေက ပိုပြီး ပြင်းထန်လာတယ် ။ ညည်းညူ ငိုကြွေးသံတွေ ပိုပြီး ကြားလာရတယ် ။ စွမ်းဆောင်နိုင်သူတွေကလည်း ကမ္ဘာကြီး ကိုအငိုတိတ်ဖို့ စွမ်းသလောက် ကြိုးစားနေကြတယ်။
ဒီလောက်ကြိုးစားနေတဲ့ကြားက ၊ ငို ယိုအော်ဟစ် သံတွေ ပိုပြီး ကျယ်လာတယ် ။ ဘာကြောင့်ပါလဲ ? ။
လူကို လူလိုမမြင်သေးသမျှ် ၊ လောကကြီးမအေးချမ်းနိုင်ပါဘူး ။ လူကိုလူလိုမမြင်ပဲ ကုလား တရုတ် ၊ အင်္ဂလိပ် ၊ သူဌေး ၊ ဆင်းရဲ ၊ ဘုရင်၊ သူတောင်စား ၊ လို့နာမည် တတ်ပြီး ကြည့် နေသေးသမျှ ၊ ဆူပွတ်မူ တွေရှိနေဦးမှပါ ။
လူ ကို လူ လိုဖြစ်သော အမြင်သည် ဓမ္မ အမြင် ဖြစ်ပြီး လောက ကြီး ကိုငြိမ်းချမ်းအောင် လုပ်နိုင်စွမ်းပါသည် ။
လူကို ခွဲခြား ပိုင်းဖြတ် သိမြင် သော အမြင်သည် အဓမ္မ အမြင် ဖြစ်ပြီး လောက ကြီးကို ဆူပွက် လောက်ကျွမ်း အောင်ပြု နိုင်ပါသည် ။
တကယ်တမ်း လောက ကိုငြိမ်းချမ်း စေလိုလျှင် ၊ အစစ်သစ္စာ ကိုမြတ်နိုးတတ်ရပါမည် ၊ အမှန် ကိုအမှား ပြော ပြီး ၊ အမှား ကိုအမှန် ကို အမှန် ဟု ဖြစ်နေ လုပ်နေသရ်ျကာလပတ်လုံး ၊ အရာရာ အားလုံး ကျဆုံးနေပါမည် ။
သစ္စာတရားကိုမြတ်နိုးတတ်ဖို့အတွက် သစ္စာတရားကိုသိဖို့ လိုဖို့ ကိုယ်မှာလည်းရှိဖို့ လိုသည် ။`
တကယ်တန်း ပါရမီ မြောက်သစ္စာ ဖြစ် ဖို့ က ကိုယ် ၊ နုတ် ၊ စိတ် တဖြောင့်တည်း ဖြစ် ဖို့ လို သည် ။ ၊ မရှိလျှင် မွေးမြူ ရပါမည် ။ တစ်စ ၊ တစ် စ ကျင့်ုယူရပါမည်…. ဟုမှတ်ယူယုံကြည်ရင်း………
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 19.12.072ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
ညက မှောင်လွန်မကမှောင်နေပြီ ။
ဘ၀ တွေကရော ညနဲ့တသားထဲပါပဲလေ ။
ဘယ်သူကမှ လှောင်ချိုင့်ထဲမှာ မနေချင်ကြပါဘူး ။
စိန်စီထားတဲ့လှောင်ချိုင့် ၊ ပတ္တမြား တွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့လှောင်ချိုင်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လှောင်ချိုင့် ဟာ ၊ လှောင် ချိုင့်ပါပဲ လေ ။ သူ့အလုပ်ကိုက ပိတ်ထားဖို့ ၊ဆီးထားဖို့ ၊ ကွယ်ထားဖို့ပါပဲ ။
အတုမာယာ ကိုတန်ဖိုးထားကိုးကွယ် နေသမျှ ကာလပတ်လုံး အစစ် သစ္စာ ဟာ ကျွန်တော် တို့နဲ့ဝေးနေဥဗဗီးမှာသေချာပါသည် ။
ကျွန်တော် တို့ ကလည်း မာယာ ကွန်ယက်မှာ နှောင်ဖွဲ့ကြီး ပြင်းလာသူများမို့ မာယာကို သစ္စာထက်ပိုပြီး တန်ဖိုးထားနေကြတယ်လေ ။
မာယာကိုသစ္စာမှတ်ပြီး ကိုးကွယ် မိတဲ့အခါ အရာရာအားလုံး ဟာ ပျက်သုန်း ခြင်း ကိုရောက်သွားတော့တာပါပဲလေ ။
လောကကိုတကယ်တမ်း ငြိမ်းချမ်း စေလိုတယ် ဆိုရင်တော့ ၊ ကာယကံ ၊ ၀စီကံ ၊ မနောကံ ၊ ထို ကံသုံးပါး စလုံး တဖြောင့်တည်း ဖြစ် ဖို့လို့တယ်လေ ။ ဟုတ်ပါတယ် ။ မလွယ်ဘူး ။ ကျင့်ယူရမှာပေါ့ ။ တစ်နာရီ ၊ နှစ်နာရီ ၊တစ်ရက် ၊နှစ်ရက် ၊ နှစ်ရက် မှ နှစ် ၊ ထိုမှတဆင့် တက်ပြီး တစ်သက် တာဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ယူရမယ်လေ ။့
သိမ်းပိုက်ရယူခြင်း တွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အနှောင်အဖွဲ့ တွေဟာလိုက် ပါလာမြဲပါ ၊ အနှေင့်အဖွဲ့ ဆိုက တည်း ကမလွတ်လပ်တော့ဘူး ၊ မလွတ်လပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဟာ လှောင်ချိုင့်ထဲမှာ နေရတာနဲ့ အတူတူပဲလေ ။ ဒီတော့ စောစောက ပြောခဲ့ သလိုပေါ့။
စိန်နဲ့ပဲ စီထားစီထား ၊ ရွေနဲ့ပဲ ကွပ်ထား ၊ ကွပ်ထား လှောင်ချိုင့် ပါပဲနော် ။
တကယ်တော့ ဒီကမ္ဘာ ၊ေ လာက ကိုတည် ဆောက်ခဲ့သူ တွေရဲ့ လက် ပါဟာ ၊ သိမ်းပိုက်ခြင်း ကင်းတဲ့လက်တွေပါ ။ သူတို့ ရဲ့နှလုံးသားဟာသစ္စာ တွေနဲ့ လင်းနေခဲ့တာပါ ။ သူတို့မှာ ရှိတဲ့သတ္တိပါ ။ စွန်လွန်အနှစ်နာခံမူ နောက် ကပါ လာတဲ့ သောက မဲ့ချမ်း သာနဲ့ အနှေင့် အဖွဲ့ အတွေထဲ ကရုံးထွက် ခဲ့သူ တွေပါ် ။
ရရှိလာမဲ့ အကျိုးတစ်စုံ တစ်ရာ ကိုမှမမျှော်လင့်ပဲဘ၀လမ်း ကိုလျှောက်ခဲ့ကြသူတွေလေ။
ဒီလမ်းကိုကျွန်တော်တိုနိုင်သလောက် လျှောက်ရမယ် ၊ အဆုံး ထိလျှောက်ရယမယ် ၊ ငြိမ်းလုလုဖြစ်နေတဲ့ သစ္စာဆီမီးကွယ်မသွားဖိုကျွန်တော် နားလည် နေတာကနောက်ဆုတ်ဖို့ မရတော့သလို ၊ လက်တွဲဖြုတ်ဖို့ မဖြစ်ပါဘူးဆို။
အခုသစ္စာဆီမီး ငြိမ်း စပြု နေပြီ ၊ ဒီဆီမီး ကိုမငြိမ်း ဖို့ ၊ သစ္စာအလင်းရောင် တည်နေဖို့ ၊ကျွန်တော် တို့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဖို့ချစ်ဖို့လိုတယ် ၊ တစ်ယောက်လောက်ကိုတစ်ယောက်မြဲသထ် ၊ မြဲအောင်ဆုပ်ကိုင် ၊မြဲအောင်ကိုင်ထားဖို့လိုတယ် ၊ တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက်အနှစ်နာခံနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ် ။
မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုပြောနေတာဟုတ်မဟုတ် ကိုစဉ်းစားကြည့်ရင် သိပါတယ် ။ တကယ်တမ်းအနှစ်နာခံ နိုင်မှုကလည်း ကျင့်ယူရင့်ရပါတယ် ။ အနှစ်နာခံမှုကရလာတဲ့ ချမ်းသာ ဟာအားလုံး သောချမ်းသာတွေ ထကအေးချမ်းပါတယ်။် သိမ်းပိုက်ရယူခြင်းရဲ့ချမ်းသာမှုတိုင်း ရဲ့ နောက်ကွယ် မှာ သောက ဟာ အဖေါ်အဖြစ်လိုက်ပါလာစမြဲပါ ။
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 16.12.07 1 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
မြတ်စွာဘုရား ရဲ့တရားက တကယ်အေးချမ်းပါတယ် ၊ လိုက်ပြီး ကျင့်ကြံနိုင်ဖို့ပဲလိုတယ် ၊ မလွယ်ဘူး ၊ လွယ်တယ် ဆိုတာ က ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလိုတယ် လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် ။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနတ္တ ဒေသနာက နက်နဲ လွန်းအားကြီး တော့ ကျွန်တော် ငမိုက်သားညဏ်နဲ့ ဘယ်မြင်နိုငမလဲလေ ။ဒီတော့ ကျွန်တော် ဘာမှမလုပ်တော့ဘူး ၊ အနတ္တ ကိုမေ့ပစ်လိုက်ပြီး ငါဆိုတဲ့အတ္တ ကို ကိုယ်ကွယ်း လိုက်မိတယ် ၊ ငါဆိုတဲ့အတ္တ ကိုမလွတ်တမ်း ၊ ဖမ်းဆုတ်ပြီး ၊ ဘ၀ ကိုကျင့်လည်နေလိုက်တယ် ၊ မမှီတဲ့ပန်း ကိုမလှမ်းနိုင်သေးတော့ မှီရာပန်းကိုလှမ်းပြီး ချူ လိုက်တယ် ဆိုပါစို့ ။
င့ါကြောင့် သူတစ်ပါး မနှစ်နာစေရဘူး ။ ငါ့ကြောင့် သူတစ်ပါး စိတ်ဆင်းရဲ ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲ မဖြစ်စေရဘူး ။
င့ါကြောင့် သူတစ်ပါး တာဝန် မပိုစေရဘူး ။ အဲဒီ ငါ ဆိုတဲ့ အတ္တ ကို ထွက်မပြေး သွားအောင် သံကွန်ချာ ရှိရင် ခဏလေးဌါးပါ ။ ဒီ ငါ ကို ဖမ်းချူပ် ထားချင်သူပါ ။
အနတ္တညဏ်မြင်မှ ရောက်မဲ့ သစ္စာစံအိမ် မရောက်ခင် ၊ ငါ က သစ္စာစံအိမ် ကိုသွားဖို့ လမ်းသွယ်တစ်ခုလို့ယုံကြည်ရင်း ။
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 14.12.070ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
စာရေးသူရဲ့Blogကိုလာပြီး ဖတ်ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ၊ အားပေးကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ၊ comment တွေပေးခဲ့တဲ့လေးစားအပ်သူတွေ ၊ အကြံပေးခဲ့သူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။တတ်နိုင်သမျှကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာပါ ။
လသားလောက်သာရှိသေးတဲBloggerအသစ်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ၊ အားနည်းချက် အများကြီးရှိ ပါတယ် ။ ဒါကိုသီးခံပြီး အားပေးကြသူများကိုလေးလေးစားစား ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
စာရေးတတ်လို့မဟုတ်ပါဘူး ၊ အဝေကြီး ကိုပြေးထွက်သွားတဲ့ သစ္စာတရား ကိုပြန်ယူနိုင်တဲ့ နေရာ မှာ ၊ ကျွန်တော် ဟာ သဲတမှုံ စာလောက် ပဲဖြစ်ပါစေ ၊ပါမယ် ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက် နဲ့ ဒီBlogကိုရေးတာပါ ။
ဟုတ်ပါတယ် ၊ ယိုင်နဲ့နေတဲ့ သစ္စာခံအိမ်ကိုပြန်ပြီးပြုပြင်တည်ဆောက်ဖို့လက်တွေလိုနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော် လက်တွေမကျန်ခဲ့ချင်ပါဘူး ၊ သဲတစ်ပွင့် ပဲကောက်ရ ကောက်ရ ၊ အုတ်တစ်ချပ်ပဲ သယ်ရပါစေ ကျွန်တော် လိုက်ချင်လို့ပါ ။
ကျွန်တော် နားလည်သလိုပြောပါရစေ ၊ သစ္စာအလင်းကွယ်ပျောက်ခြင်း ဟာ ၊ တစ်ခြားသောအလင်းရောင် ကွယ်ပျောက်ခြင်းထက် ၊ အဆပေါင်း မနိုင်းသောအောင်လူ ၊နဲ့ (31)ဘုံကို အကန်းဘ၀ ကိုတွန်းပို့ပါလိမ့်မယ် ။
ကျွန်တော်တို့ အစွမ်းရှိသလောက်သစ္စာအလင်းရောင်ကို ၊ကွယ် မသွားဖို့ကြိုးစား ရပါလိမ့်မယ် ။ ပြို ကျလုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ သစ္စာစံအိမ် ကို ၊ပြန်ဆောက်ဖို့ ကျွန်တော်ပါလာခဲ့တာပါ ။
တော်လွန်း၊ တတ်လွန်း လို့မဟုတ်ပါ ။ ကျွန်တော် အားလုံး ဆီက အမြဲတမ်းသင်ယူနေတဲ့လူလို့………၀န်ခံရင်း ..။
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 13.12.07 1 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 12.12.07 1 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
ငယ်ငယ်လေးတုံးက ….ကိုယ်ဘာသာကိုယ် လုံးဝမကျေနပ်ဘူး ၊ ကိုဘာသာကိုယ် ငရဲသားလို့ ထင်မိတယ် ၊ ကျွန်တော် ဆို လိုတာက ၊ ကိုယ် ကိုတိုင်းလည်း ဆင်းရဲတယ် ၊ သူတစ်ပါး ကိုလည်းဆင်းရဲကြောင်း ဖြစ်အောင် လုပ်နေတဲ့လူဟာ ငရဲသားပေါ့ ၊ ကိုယ့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ ၊ အခြား သူတွေ တာဝန်ပိုရတာ ၊ အလုပ် များရတာ ၊ စိတ်ပင်ပန်း ၊ လူပင်ပန်း ဖြစ်စေတာ ၊ အင်မတန် မှ ရှက်စရာ ကောင်းတယ်လို့ ခံစားမိတယ် ၊ ကိုယ် ကပဲ တစ်ခြား သူတွေ အတွက် တတ်နိုင်သမျှ လုပ်ပေးချင်တယ် ။ ကိုယ်လုပ်ရမဲ့ အလုပ်ကို သူများက လုပ်ပေးရတယ် ဆိုကတည်း ကိုယ် အသုံးမကျတော့ဘူးပေါ့ ၊ အသုံးမကျရင် အသုံးမကျဘူးလို့ လူကြီး မိဘ ကပြောရင်လည်း စိတ်ဆိုးချင်သေးရဲ့…….. လူ့အမှိုက်ပေါ့ဗျာ ။ အမှိုက် ဆိုကတည်းက………….ဘာလုပ်လို့ရဦးမှာလဲ?
အဲလိုပဲ………..ကျန်းမာရေးအတွက် လမ်းလျှောက်တော့နံဘေးက အကူနဲမှဖြစ်ရတဲ့ဘ၀မျိူး ၊ ဘောလုံးလဲကန်ချင် ၊ လက်ဝှေ့လည်းလည်းသတ်ချင် ၊မရဘူး…….ဒီလိုနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ဘ၀။
တစ်နေ့………ညနေစောင်း…လမ်းလျှောက်ထွက်တော့………နံဘေးမှာ ဘဘ ပါတယ် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ လက်တစ်ဖက်မရှိတဲ့ လူတစ်ယောကလမ်းလျှောက်နေတာကို ကျွန်တော်ကိုပြရင်း
ဒီတော့ ဘဘကမေးတယ် ၊ ဘယ်မှာလည်းပေါ့ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော် ပြ၇တာလေ ။ ဒီမှာတင် ဘဘဆီက မေးခွန်းတွေထပ်ထွက်လာတယ်
ဥပမာ သားဆီမှာပိုက်ဆံတစ်ကျပ်ရှိတယ် မရှိလို့သာ တောင်းရင်ပေးမှာလား…….။ ပေးမယ် လို့ပြောတယ် ။ဒီလိုဆို တစ်ကျပ်လုံးတောင်းရင်ကောပေးမှာလားလို့လဲမေးရော၊ ကျွန်တော်အဖြေက ၊ မပေးဘူးပေါ့ ပေးရင် ကျွန်တော် ငတ်သွားမယ်လေ ၊ ဒီစကား ကိုပြုံးပြီး နားထောင်ရင် ဆုံးမခဲ့တဲ့စကားကို ပြန်ပြီးဖေါက်သည် ခရရင်
(1) အယူသာရှိပြီး ၊ အပေးမရှိတဲ့ လူက တကယ် ဒုက္ခိတ
(4) အလုံးစုံသန်စွန်းနေပါလျှက်နဲ့ ကိုယ်လုပ်ချင်သမျှကိုကျန်တဲ့သူတွေ ကလိုက်လုပ်ပေး နေတာကိုကျေနပ်အချောင်ခိုနေတဲ့သူကမှတကယ့်ဒုက္ခိတဲ့လေ။
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 10.12.07 1 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
blogတွေကိုလျှောက်ဖတ်ရင်းနဲ့ ၊ စာရေးချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့ ဒီစာတိုလေးကို ၊စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်း ရေးချလိုက်မိပါတယ် ။
ပထမဆုံးအားပေးခဲ့တဲ့ဘုန်းဘုန်း၊ညလေး၊စာဖတ်ပြီး စီဘောက်မှာ post တင်လို့ မရတဲ့ မလင်းလက် ၊်စာကိုရင်ထဲ ရောက်အောင်ရေးတတ်တဲ့ကိုthinker ၊ အဝေးကြီးကကိုချစ်သူ ၊ပန်းရောင်လေးတွေနဲ့ ဖွဲ့ထားတဲ့ ယုန်လေး ၊ မေငြိမ်း ၊ မာန်လှိုင်းငယ် ၊ဒိုင်ရာရီ ၊အများကြီးရှိသေးတယ် ကြေငြာ ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ နာမည်ထုတ်မရေးတာက မလေးစားလို့မဟုတ်ဘူး ၊မချစ်လို့မဟုတ်ဘူး ၊ ကျွန်တော်အများကြီးဖတ်ခဲ့ပြီး Linkမချခဲ့တာက ၊ကျွန်တော်blog ကသူများ တွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ၊အားလုံးထက်ညံ့တာကိုတွေးပြီး ရှက်လို့ပါ ။ ရေးဖို့နာမည်ကျန်ခဲ့ပေမဲ့ ရင်ထဲမှာအမြဲရှိပါတယ် ။ကံကြမ္မာ ကခွင့်ပြုခဲ့ရင် ဒီအဆိပ်မသင့်တဲ့ လက်တွေကို ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျဆွဲကိုင်နှုတ်ဆက်နိုင်မှာပါနော် ။
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 9.12.07 1 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 8.12.07 1 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
ညကအတော်နက်နေပြီ ၊ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လို့ ၊ ဆောင်းလေနဲ့အတူ နှင်းတွေ့ ကကျွန်တော်ဆီလွင့်လာသလို ခံစားရတယ်။ ခပ်ဝေးဝေး ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းကပျံ့ထွက်လာတဲ့ ပဋ္ဌန်းတရားတော်ကို ငြိ်မ်သက်နာယူနေပေမဲ့ စိတ်ကဟို ရောက် ဒီရောက် နဲ့ ဆောင်းလေလိုပဲ ၊ နောက်ဆုံး မထူးတော့တာမို့ ၊ မျက်လုံး ဖွင့်ပြီး ၊ အပေါ် ကိုမော့ကြည် လိုက်တော့ လဆုတ်ညမှာသာတဲ့လ။ ကျွန်တော့်၇င်ကိုအေးစေတယ်။
ဒါကအတ္တကိုဆုတ်ကိုင်ပြီးတွေးတာပါ ၊ ဒီ သာနေတဲ့ လ က ကျွန်တော်အတွက် သက်သက်လင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလေ။ မျက်နာမလိုက်ပဲအစွမ်း ရှိသမျှ ကမ္ဘာပေါ်ကရှိရှိသမျှသက်ရှိ ၊ သက်မဲ့အားလုံးပေါ်မှာလင်းနေတာ၊ အေးမျှနေစေတာပါနော် ။ ဆင်းရဲသူရော ၊ ချမ်းသာသူရော ၊ ဘုရင်၊ သူတောင်းစား ၊ ခွဲခြားမထားပဲလင်းစေ၊ အေးမျှစေတာလေ။
လူတိုင်း ကလပြည့် သာတဲ့လကိုပဲ သတိထားမိတတ်ကြတယ် ၊ သာတယ် ၊ အေးတယ် ၊လင်းလက်တယ်ပေါ့။ ဒီ
လိုဆို တစ်ခြား လဆန်း ၊ လဆုတ် ရက်တွေရော် ဒီလ ကမသာဘူးလား ၊ မအေးတော့ဘူးလား?
သာပါတယ် ၊ အေးပါတယ် ၊ တစ်ခြမ်း ရှိရင် တစ်ခြမ်းတစ်ခြမ်း အစွမ်းအစနဲ့လူတိုင်းရင်ကိုအေးစေတယ် ၊ တစ်စိတ်ရှိရင်တစ်စိတ်နဲ့လူ တိုင်း ရင်ကိုအေးစေတယ် ၊ အစွမ်းရှိသမျှ လေ၊ လမင်းရဲ့ရန်သူတွေဖြစ်တဲ့ ဆီးနှင်း ၊ မြူ ၊ တိမ် ၊ အသူရိန် ၊ မီးခိုး ရန် သူမျိူးငါးပါးကင်း ရင် ၊ မြင် ပါလိမ့်မယ်သူအလင်းကိုလေ။
သူအရိပ် ၊ လ ရဲ့ တံဆိပ် ကိုယ်တိုင် က၊ သူတစ်ပါး အတွက် ၊ လောက အတွက် ၊အနစ်နာ ခံစွန့်လွန်မူကရခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာတည် မဲ့မော်ကွန်း ၊သိကြား သွန်းတဲ့ ယုန် အရိပ် လေ။
ယူန်မင်း ရဲ့စံပြုထိုက်တဲ့သီလ ၊ ကမ္မည်းတင်အပ်တဲ့အနှစ်နာခံစွန့်လွန်မူု......ကို မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ လမင်းဟာသူကိုဟောင်တဲ့ ခွေးလည်းပဲ့လင်းမှာပါ ၊
ဒီလိုပဲ လောကအတွက် ၊ အများ အတွက် အနှစ်အနာခံစွန့်လွန် ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ စွန့်လွန်ဆဲ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ စွန့်လွန်အနှစ်နာခံမဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တွေကို ၊ ရိုသေလေးနက်လိုက်လဲစွာရှိခိုးနေမိတယ်
ကျွန်တော်စွမ်းရင်လေ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကို လည်းယုန် အရိပ်ခံဗိမာန်လေးမှာ.......အင်း.....စာဖွဲ့လို့ထားပါလိမ့်မယ်လို့။
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 5.12.070ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
တလောကတော့ရေးဖြစ်ပါတယ်(ချစ်ခြင်း)အကြောင်းပေါ့ ၊ အခုတော့ကရုဏာဆိုတဲ့ သနားခြင်း ၊ အကြောင်းကိုရေးမိတယ်။ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို ၊နားလည်သလို ပြန်ပြီးဝေမျှတယ်ပေါ့
ကရုဏာ ဆိုတဲ့ပါဋိစကားကိုမြန်မာပြန်တော့ သနားခြင်း ၊ဒုက္ခရောက်နေသူကိုသနားခြင်း ဒီလိုပဲ။`
Dictionary တွေထဲမှာတော့ compassion တဲ့
A feeling of sympathy for people who are suffering .
ဒါလဲအားလုံးသိပြီးသားပါ။ ဒုက္ခခံစားနေရတဲ့သူကိုသနားတယ်ဆိုတဲ့သူကိုသနားတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမူတစ်ပါးရှိလာတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြန်မေးတာပေါ့လေ။ သနားတယ်ဆိုရုံလောက်နဲ့ဒီကရုဏာရဲ့အဓိပါယ်ပြီးစုံစွာသွားပြီး
ဆိုပါစို့ လူတစ်ယောက်၊ (သို့) ခွေးတစ်ကောင် ကိုယ့်ရှေ့မှောက်မှာ ဒဏ်ရာရနေတယ်၊ ဝေဒနာတစ်ခုခု ကိုအကြီးအကျယ်ခံစာူးနေရတယ်။သနားစရာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီး လှည့်ပြန်သွားရုံနဲ့တော့ပြီးမသွားဘူုး။ ဆေးကုရမယ်၊ ဆေးရုံပို့ရမယ်၊ ဒီဝေဒနာသက်သာဖို့တစ်ခုခုတော့ ကူညီရမယ်………… ဟုတ်တယ်ဟုတ်?
`သေမှာပဲကွာ ထားလိုက်ပါ´ဆိုပြီးထွက်သွားရင်တာဝန်မဲ့တာပဲ ၊ သေခြင်းရှင်ခြင်းကိစ္စကဝေဒနာရင်ရဲ့ကံနဲကံရဲ့အကျိူးပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 28.11.070ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
Life is not dream, everybody know about that but some story like asadream.When I hadanightmare, pray to the Buddha to be free from it.Now I'm under the nightmare however it is so hard to escape withuot effort.So we must try to esacape from the nightmare.
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 25.11.070ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
Now the world is full of wile and violence but thesuffering people are sinking in the darkness till now however there is no light for them.
The hypocracy will go more and more.The sublime Dhamma are useless for them .Please do let me ask one that what is the compassion for suffering people?
no words can be describe my suffering feeling.
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 21.11.070ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
လူသားပုထုစဉ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ၊ လောဘ ၊ ဒေါသ ၊မောဟစတဲ့စိတ်တွေရှိနေတာပါပဲ၊ အတ္တရော မာနပါရှိပါတယ်။ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့အတ္တနဲ့မာနမရှိရင်လည်း ၊ လူမူအသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာနေလို့မဖြစ်ဘူးလေ။
ဒီတော့ ဘာမှမဟုတ်သေးတဲ့ သာမန်လူသားတစ်ယောက် ပီပီ ဘုရားသွားပြီး လိုတဲ့ဆုကိုတောင်းမိတယ် ၊ဆန္နပြုတယ်ပေါ့ ၊တကယ်တော့ ဒီဆုတောင်းနဲ့ပြည့်ဝ လိုက် ဖက်တဲ့(ကံ)အလုပ်ပဲနဲ့တော့ဘာမှမရဘူး။
ပိဋကတ် တော်ထဲမှာ လိုတာအကုန်ရှိတယ်။ ဘုရားကပြောတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ကပျင်းတယ်၊ အချောင်ခိုတယ်၊ တတ်ရောင်ကားလုပ်တယ်။
ဒီပင်္ကရာ မြတ်စွာဘုရား ရှေ့မှာ သုမေဓါ ရှင်ရသေ့ဘ၀နဲ့ဆုပန်တယ်။ ဒဲဒီဆုပန်တဲ့အတိုင်းလည်းဘုရားဖြစ်မဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ခဲ့တယ်။……… ဖြစ်ခဲ့တာပါပဲ။သုံးလောကရဲ့အထွဋ်အထိပ်။
ကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းတယ်။တောင်းတဲ့ဆုနဲ့ညီအောင်မနေဘူး၊မလုပ်ဘူး ၊ ဒီတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေ…..သတိပြုမိဖို့ကောင်းတယ်
ကျွန်တော်လည်း ဆုတောင်းပါတယ်၊ လေးလေးနက်နက်ကိုဆုတောင်းတာပါ ဒါကတော့
(1) ဘု၇ားစကားကို နားထောင်သိဖြစ်နိုင်တဲ့လူဖြစ်ရပါလို၏။
(2) ကိုယ်ပြောတဲ့စကားကို ကိုယ်တာဝန်ယူပြီး အကောင်ထည်ဖေါ်နိုင်တဲ့လူ ဖြစ်ရပါလို၏
(3) ကိုယ်ဘာသာကိုယ် လေးစားနိုင်တဲ့လူဖြစ်ရပါလို၏ လိုဆုတောင်းတတ်ပါတယ်
`အဇာတသတ်´ လိုဥပဒါန်အစွဲနဲ့မအိပ်နိုင်တဲ့လူ ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ။
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 18.11.070ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
ကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာကိုခဏလေးလာတဲ့ဧည့်သည်၊အိမ်ရှင်တာဝန်ကျေပါတယ် ၊စားစရာအစာ ၊သောက်စရာရေ ၊နေဖို့နေရာ…..လိုလေသေးမရှိ။
ဒါပေမဲ့ ၊ကျွန်တော်တို့တစ်တွေလေ ၊ဧည့်သည်တာဝန်မကျေဘူး ၊အိမ်ရှင်ကိုစော်ကားကြတယ်၊ အရိပ်နေပြီး အခက်ချိုးကြတယ်။
ကမ္ဘာမြေပေါ်ရောက်စက`ဖြူစင်ကြည်လင်´နေတဲ့စိတ်ကို ၊ ပိုင်ဆိုင်ရလိုမှု အတ္တတွေနဲ အရောက်ကတစ်မျိူး၊မနာလိုတဲ့အရောင်ကတစ်ဖုံး၊ န်ဆောင်ကြွားဝါမှုကာလာတွေချယ်ရင်းနဲ့နလုံးသားဟာ ညစ်ပေမဲနက်နေတဲ့ပန်းချီကားတစ်ချပ်ဖြစ်သွားတယ်လေ၊ ဒီမဲညစ်နေတဲ့ပန်းချီကားကိုအချောင်သမားစိတ်နဲဘောင်ကွပ်ပြီးနေလာလိုက်တာကမ္ဘာကြီးငိုတဲ့အထိပါပဲလေ။
မှန်ပါတယ်..မြတ်ဘုရားရဲ့ဒေသနာကိုအမှန်အကန်သိနားလည်မို့ အတွက်၊ ကိုယ်ချင်းစာတရားဟာ အခြေခံပဲလို့ ယုံကြည်သလို၊ ကမ္ဘာကြီးကိုငြိမ်းချမ်းအောင်လည်းစွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လိုယုံကြည်မျှော်လင့်ရင်း။
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 17.11.070ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 14.11.070ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 12.11.070ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 9.11.070ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
You’ll have to work to find peacefulness in the world .It is like reaching water forawell-it’s there but you have to dig for it .Or like an orchard that’s already planted –the fruit are there, but you have to pick them. they won’t just into your month.
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 8.11.070ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
Have you ever seen flowing water? Have you ever seen still water? If your mind is peaceful, it will be just like still, flowing water? Have you ever seen still, flowing water? There! You've only seen flowing water or still water, haven't you? When your mind is peaceful, you can develop wisdom. your mind will be like flowing water, and yet still. It's almost as if it were still, and yet it's flowing. So I call it "still, flowing water. "Wisdom can arise here.
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 6.11.070ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊